U-Byton ubonakalisa imoto yombane yexesha elizayo (nevidiyo) | Iindaba zeGajethi
URuben inyongo | | elektroniki
Ukuba sibeka izinto ezininzi kwimveliso enye, ngokuqinisekileyo siya kuba nemveliso ejikelezayo. UByton, inkampani yaseTshayina eyazalelwa e-CES 2018, ibonakalise umbono wayo othile wemoto yexesha elizayo. Olu hlobo ludibanise iikhonsepthi ezinje: I-SUV, imoto yombane, ukubonwa kobuso kunye nexabiso elifikelelekayo. Ngaloo ndlela kwazalwa umxholo weByton SUV.
Le moto ngumbono othile wenkampani yaseTshayina eye yafuna ukuzibonakalisa kwihlabathi kwezona zinto zibalulekileyo kwezobuchwephesha kwaye ihlala ivula unyaka omtsha. ELas Vegas, U-Byton usibonisa imoto yombane kunye nenengqondo ngokupheleleyo yoyilo olunomtsalane. Ungaphoswa yile vidiyo ingezantsi. Uya kuwa eluthandweni:
Ingqokelela yeByton SUV yimoto enkulu (4,85 yeemitha ubude). Ke ngoko, silindele ikhabhathi enkulu apho singaphumla khona ubuninzi kuhambo olude. Njengoko kubonisiwe kwimifanekiso yokuqala, i-SUV inayo Izihlalo ezi-4. Ewe bonke, ngokungathi uhleli esofeni ekhaya.
Kwelinye icala, izinto ezisothusayo zivela ngaphandle kwale mbono kaByton: Ayinazo izipili okanye izibambo zokuyivula. Kulapho ezinye zeetekhnoloji ziqala ukuvela khona. Okokuqala, izibuko zithathelwa indawo ziikhamera ezisecaleni eziza kukubonelela ngombono omkhulu wangaphandle ngescreen esikhulu kwideshibhodi esiza kuthetha ngaso kamva. Ngoku, izakuvula njani le moto yaseByton? Kwizakhelo zeengcango zangaphambili siya kuba nazo iikhamera zokuqwalaselwa kobuso. Oku akuyi kwenza lula ukufikelela kwimoto kuphela, kodwa ngokwazi umsebenzisi zonke izicwangciso (izihlalo, ivili lokuqhuba, njl. Njl.) Ziya kubekwa njengoko bezinkqaye.
Kwelinye icala, ngaphakathi kuyo yonke into iya kulawulwa ngescreen esikhulu esihlala kwideshibhodi yonke. Ngaba Iscreen sokuchukumisa zii-intshi ezingama-49 Kwaye iya kusinika zonke iintlobo zolwazi: ukusuka ekusebenzeni kweemoto (zombane) kulwazi lwe-intanethi.
Okwangoku, yimoto yombane ngokupheleleyo. Kodwa ukukugcina uzolile, inkampani iyaphawula Ukuzimela kwayo kuya kuba ziikhilomitha ezingama-400 ngentlawulo enye -Lolu hlobo lweemoto sele lukhulisa ukuzimela ngokubonakalayo. Ngelixa ixabiso lokuqala lingabizi kakhulu: $ 45.000 (malunga 37.500 euro utshintsho lwangoku). Nangona kunjalo, le moto ingumbono kuphela, nangona singazi ukuba kule nguqulo siya kuba nakho ukubona imoto esebenzayo ngokupheleleyo xa ithengiswa ngexesha elifutshane.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » U-Byton ubonisa imoto yakhe yombane yexesha elizayo (nevidiyo)